Shiinaha Steam dareeraha heerkulka soo saaraha
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka dareeraha > Steam dareeraha heerkulka
Marawaxada Steam qaadista cabbirka heerkulka isku xira deg deg ah
Heerkulka soo celinta saliida marawaxadaha iyo heerkulka saliida ee qaboojiyaha badanaa waxay isticmaalaan iska caabin kuleylka ah gudbinta calaamadaha, heerkulbeegga bimetallic ayaa lagusoo bandhigayaa isla goobta, waxaa lagugula talinayaa in loo isticmaalo qaab dhismeedka anti-gariirka iyo kahortaga dheecaanka si loo hubiyo xasiloonida muddada-dheer ee cabbirka heerkulka.
Qiyaasta nidaamka heerkulka soo celinta saliida marawaxadaha
Steam cabirka heerkulka jirka
Dhibcaha cabbirka heerkulka silsiladda guud ahaan waxaa ka mid ah heerkulka gudaha iyo dibedda ee dhululubada cadaadiska sare leh, iyo heerkulka gudaha iyo dibedda ee dhululubada cadaadiska dhexe.
Qiyaasta heerkulka uumiga marawaxada
Qodobbada cabbiraadda heerkulka uumiga ayaa diiradda saaraya cabbirka heerkulka dhammaan dhuxusha soo saarta dhuxusha, taas oo inta badan ay ku jiraan heerkulka ugu weyn ee uumiga, heerkulka uumiga ee qaybta kulul ee kululaanaya, iyo heerkulka uumiga ee qaybta qabow ee kululaatay.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan Steam dareeraha heerkulka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh Steam dareeraha heerkulka kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.